Ranbir Kapoor Oo U Xanaaqsan Kangana Ranaut Dagaalka Ay Saaxiibtiisa Alia Bhatt Ku Heyso Maxaa Alia Bhatt Ka Aamusiiyay, Dagaal Ka Dhan Sedex Qoys Oo Dhici Rabo (Reer Ranaut, Reer Bhatt Iyo Kapoor) – Filimside.net
Ranbir Kapoor Oo U Xanaaqsan Kangana Ranaut Dagaalka Ay Saaxiibtiisa Alia Bhatt Ku Heyso Maxaa Alia Bhatt Ka Aamusiiyay, Dagaal Ka Dhan Sedex Qoys Oo Dhici Rabo (Reer Ranaut, Reer Bhatt Iyo Kapoor)
Sidaan idiin la wadaagnay xog badan oo ku saabsan dagaalka ka dhaxeyo reer Bhatt iyo reer Ranaut ayaa meeshii ugu sareysay maraayo baraha bulshada ayaana la isku jafayaa.
Dagaalkan hader waxaa qeyb ka noqday jilaaga caanka ah Randeep Hooda oo la saftay sido kalena difaacay Alia Bhatt isagoo Kangana ku sheegay qof waalan oo maskaxda looga jiro hadaba saxaafada ayaa warar xan ah soo heshay hader.
Qoyska Ranbir Kapoor ayaa sheekadan dhinac kasoo galayaan hadii Kangana iyo walaasheed dhibka joojin waayaan waana sida laga soo xigtay dad ka akdhow Ranbir Kapoor oo saxaafada u sheegen arinkaan.
“Ranbir Kapoor ayaa aad oga xumaaday aflagaadada Kangana Ranaut iyo walaasheeda Rangoli maalmahan ku wadaan Alia Bhatt iyo qoyskeeda maadama RK xirir la leeyahay Bhatt lana filaayo inee xaaskiisa mustaqbalka noqoto.”
“Laba mid ayee noqon doontaa inee sharciga ku dacween doonaan Kangana ama inee dagaalka afka ah dhankooda kasoo gali doonaan baraha bulshada lagu jafi doono Ranaut iyo xulufadeeda ileen RK ma jecla saaxiibtiisa lagu aflagaadeynaayo baraha bulshada.”
Sidaa waxaa saxaafada u sheegeen dad ka akdhowa RK dhanka kale Ranbir Kapoor iyo Kangana xurguf hore ayaa ka dhaxeyo kadib bishii hore markii Kangana ay weerar afka ah ku qaaday xidigaan iyadoo ku dhaleceyneysay inuusan garab istaagin dalkiisa siyaasad ahaan hadalkaas Ranbir wali kama jawaabin.
Waxa ku bateen RK Khaladaadka Kangana markaan afka miyuu furan doonaa oo halmar miyuu weerar ku qaadi doonaa waa hadal heynta duhurkaan saxaafada isla dhexmareyso wixii warar ah kasoo kordha dagaalkan afka ah Filimside kala soco..
Waxaa Aqrisay 358
qolada media ha iyaga jecel inuu rabir soo dhex galo sheekadan Ranbir haduu naagtan waalan la hadlaayo markay isaga ku dhaganayd ayuu wax ka dhihi lahaa ee waa fake iyo waxba kama jiraan ay samaysteen mediaha india qaarkood